Jawaab: Sujuudda Tilaawadu maxay tahay?
Su'aal: Sujuudda Tilaawadu maxay tahay?
Salaan kadib, marka hore waxaan kuugu hanbalyeeynayaa dadaalka wacan,hawsha wanaagsan iyo waqtigaaga qiimaha leh ee aad galisay si laguula wadaago aqoontaada cilmiyeed oo laggaaga fa'iidayesto. Ebbaa mahad leh ee waad mahdsantahay.
Fariin tan waxaan ka soo dirayaa waqooyiga ameerika, runtiina intabadan iska hor'imaadka arimaha diinta aan xal loohelin,sikastaba hanoqotee mas'alada aan kaa jawaab sugayo waxay tahay, marka Qur'aanka la akhrinaayo micnaha aad ku jir to talaawatul Qur'aan waxaa jirta dhawr iyo toban meelood oo ku faraysa inaad sujuudo. marka su'aashaydu maxay tahay;
Jawaab: ha layska ilaaliyo dadka diinta sida khaldan u fasiraya..
Su'aal: ha layska ilaaliyo dadka diinta sida khaldan u fasiraya..
Dr Xirsi asalaamu Calaykum,sheekh salaantaa ka dib, waxaan in mudo ahba soo booqan jiray sitekaagan gaar ahaan qaybta Su�aalaha iyo Jawaabaha Diinta ku saabsan, aadna waad uugu mahad santahay dadaalkaa aad u hurtay dadkaaga. walaal anigu waxaan jecelahay inaan wixii diinta ku saabsan cid kasta oo aqoon diineed igu dhaanta ka korodhsado, laakiin sidaan ku arkay Jawaabahaaga su�aal ayaa in mudo ahba igu wareegaysay wakhti aan u waayay inaan kusoo waydiiyo.
Jawaab: sheekh sideen hooyaday ugu ducayn karaa?
Su'aal: sheekh sideen hooyaday ugu ducayn karaa?
Asalaamu calaykum. Salaan kadib, Culimo waxaan idin waydiinayaa oo aan rabaa in aad iiga jawaabtaan wixii ilaahay idinka baray su aashan: Waxaan ahay nin dhallinyaro ah hooyadayna waxay dhimatay aniga oo ah 10 jir markaa hadda waxaan ahay nin wayn oo 22 jir ah. Diinta islaamkuna waxay inna faraysaa in waalidka marka uu kaa horreeyo loo duceeyo. Markaa sheekh sideen hooyaday ugu ducayn karaa Allaha u naxariistee? Jazaakalaahu khayran..
Najib Khalif Abdi <najiboss@hotmail.com>
Jawaab: Wax iiga sheeg taariikhda [jubba valley alliance]..
Su'aal: Wax iiga sheeg taariikhda [jubba valley alliance]..
Jawaab: Maxaa ku jaban tacliinta diimeed ee Soomaaliya?
Su'aal: Maxaa ku jaban tacliinta diimeed ee Soomaaliya?
Assalamu Calaykum. Walaal Dr Xersi, run ahaantii aad ayaan uga helay sida cilmiyaysan ee aad ula munaaqashootid dadka wax ku soo warsada. Waxaan kaloo la dhacay daraasadaha iyo waqtiga aad gelisay taariikhaha kooxaha islaamka sheegta ee jira maanta. Meelo ka mid ah bogga ayaan waxaan ku arkay adoo leh mar haddii caqiido la isku waafaqo waxyaabaha furuucda ah waa soo jireen oo waa la isku khilaafi karaa. Haddaba, anigu waxaan qaatay ijaazada silsildda Al-Qaadiriyah xagga dariiqada anoo weliba qurbaha jooga. Waxaan Caqiidadana haystaa Ashcariyah oo sidaad sheegtayba ah caqiidada kaliya ee Kitaabka iyo Sunnada raacsan ee Somalia ka jirta. Fiq-higa, Shaafi iyo Quraanta oo la igu baray Abu-Camar, khaasatan qirada Duuriga. Su'aashu waxay tahay, qofkii intaas isku haysta maanta waxaa loo yaqaan SUUFI adiguna sufiyada waad ka digtay? jahliga aad ku tilmaantayse mid dhanka manhajka ahba mise mid mujtamac? waad mahadsantahay Sh. Dr. Hersi